Imibono: Yini ukunikeza isipho isoka lakhe, ngezandla zakhe wenza
Hhayi kuze kube manje, futhi Day Valentine sika, lapho abathandi kufanele uthole nomunye izipho ezithakazelisayo futhi engavamile. Yini ongasinikela Faka isithandwa sakho?
Wonke umuntu cishe uyazi ukuthi engcono athandwayo kakhulu isipho - nguye owadala ngezandla zakhe. Ngakho kungani ungazami upheke into ngokwakho for lover yakho, ikakhulukazi kusukela ongakhetha ezifika njengoba omningi onjalo.
isipho Landelayo nesoka lakhe ngezandla zakhe wenza - izingubo. Uma une umshini wokuthunga, ungazama okuthile thunga it (isib, ekhishini iphinifa kusukela ihembe ubudala elibukeka ngempela stylish) noma tie namuhla ijezi nemfashini nge reindeer. isipho esinjalo kuyinto engavamile hhayi kuphela, kodwa futhi esiwusizo kakhulu ukusebenzisa. Ukuze thunga iphinifa kusukela ihembe ubudala, udinga ukuthatha lolo hlobo into ongeke ziphangwe phambi. Idinga usike ucezu esifaka collar, kancane ngaphambi, esehlanganise washona ngesikhathi ukupheka, kanye ezinye isihambile ekwehleni, kangangokuthi angabangela ukuvala hip obani uzosingatha ekhishini. Awunayo yini ekhethekile, ngakho badinga kuphela neaten imiphetho umkhiqizo ukugcina it out ngentambo, bese ukubiyela zonke piping. Kuyadingeka ukuba singakhohlwa ukubeka ucezu inlay futhi drawstrings. Yilokho isipho isoka lakhe, ngezandla zakhe wenza, kungaba khona. Uma wayefisa, ezinhlangothini iphinifa ungakwazi thunga emaphaketheni ukuze kube lula.
isipho Landelayo nesoka lakhe, enziwe ngezandla zakhe - a inhlawulo ezithile, okungaba wusizo ekuphileni kwansuku zonke. Lokhu kungaba indandatho ukhiye, wenza isembozo wazizwa ngomakhalekhukhwini noma ithebhulethi kanye nokumiswa ezilimini zokuqala liyiswa olimini umshini (isb, "umqaphi SAI"). Yenza cute brelochek nzima impela. Uzodinga wawungathi nentambo. Futhi musa ngisho badinga umshini wokuthunga! Kumele usike unamathele umumo ethize (kungase kube inhliziyo, zverushka ungakwazi ukuwunqoba uphawu lengikutsandzako) emaphuzu cishe 0.2 mm intambo onqenqemeni Stitch noma nombala ofanayo noma umehluko. amagajethi eziphezulu ungakhohlwa unamathisele emiphemeni, sibonga ngalo ukuwethamela okhiye. Konke ilungele isipho!
Uma nithanda ikhofi lover, ungazama wenze isipho yasekuqaleni isoka lakhe ngezandla zakhe kulokhu kwaziswa. Ngakho, ungakwazi nje uthenge imbiza ikhofi kanye kahle ukuhlobisa it ne-tape noma iphepha, kodwa ungaya kancane okunye futhi wenze, isibonelo, isithombe bhontshisi ikhofi (kushunqe inkomishi yekhofi), noma ngisho statuette ezincane (ikhofi ezichithekile: badinga inkomishi kabhontshisi wekhofi glue). Ukuze udale isithombe "Zezıhlabane Coffee" kudingeka zekhofi, lendwangu Uhlaka lapho isipho okuzokhishwa. Futhi kudingeka ukuba isisekelo ngempela okuqinile, lapho amboze umbala indwangu oyifunayo, phezulu ngepeniseli ungenisa inkomishi phambili okuzokwenziwa eminye anamatheliswe phezu ne zekhofi. Lokhu kumele kwenziwe ngokwenza ingcina, njengokuthi "Dragon". Umdwebo ngokwayo - ke uchaza sibalo. Kudingeka nokuba kube okusanhlamvu efanayo ukuhlobisa Uhlaka uqobo. Konke ilungele isipho!
Izithombe - izipho romantic kakhulu, le nsizwa ngezandla zakhe okulungiselelwe. Yenza izithombe zakho ozithandayo nje Uhlaka - unoriginal. Yilokho kuphela uma Uhlaka akuyona ababezenzele yona! Ungenza ikholaji yezithombe ngokuhlanganyela, Photogazette ngisho ukwakha albomchik encane ahlotshiswe Scrapbooking imiklamo. Yenza ikholaji kungaba ku Whatman usayizi wephepha A1. Ukuze wenze lokhu, udinga ukukhetha kwezithombe ezihamba phambili kusukela obathandayo futhi unamathele nabo ngendlela kunezinxushunxushu. Ngaphezu kwalokho, bonke ehlotshiswe imibiko yamaphephandaba ahlukahlukene, imidwebo noma stickers. Kuyadingeka ukuba bayakhohlwa imibhalo romantic. Zonke - isipho umfana esimthandayo, ngezandla zakhe wasebopha!
Umcamelo-ithoyizi ngezandla zabo. ekilasini Master
Imali Isihlahla izikweletu ngesandla. Indlela yokwenza ngezandla zabo isihlahla imali
Funny pirate imvunulo indodana noma indodakazi yami
Kvilingovye isithombe: isigaba master Wabasaqalayo (isithombe)
Kuthiwani uma imilenze inkwantshu, futhi ungaba yini isizathu?
Bulldozer DT 75: ezibekiweko lobuchwepheshe, incazelo, ukubuyekezwa
Funny izidlaliso amantombazane Chihuahua